मनमोहन मेडिकल कलेजका एक सञ्चालक भन्छन्, ‘गोविन्द केसीलाई बोक्ने साझा पार्टीलाई पाप लाग्यो’ – Aajako Khabar: आजै अनि ताजै
काठमाडौँ, २९ पुस, सत्तारुढ दल नेकपाका नेता एवम् प्रस्तावित मनमोहन मेडिकल कलेज सञ्चालक समितिका सचिव डा. रामकुमार अधिकारीले डा. गोविन्द केसीले राजनीतिक माग राखेर १६ औं अनशन बसेको आरोप लगाएका छन् । आइतबार राजधानीमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने,’डाक्टर केसीले राख्नुभएको ६ बुँदे मागमा स्वास्थ्य क्षेत्रबारे केही माग छैन् । उहाँले प्रष्टसँग राजनीतिक माग राख्नुभएको छ ।’
प्रदेश नम्बर ३ का सदस्यसमेत रहेका उनले डा. केसी सरकारी जागिरे भएकोले उनले निर्मला पन्तको हत्यारा पत्ता लगाउनुपर्यो भनेर माग राखेको पनि सुनाए । उनले थपे, ‘उहाँपनि सरकारी जागिरे हो नि, उहाँले हत्यारा पत्ता लगाए भैगयो नि त ।’ त्यस्तै उनले डाक्टर केसीले विदेशीको बुँई चढेर द्वन्द्वकालको मुद्दा उठाएको पनि आरोप लगाए ।
सांसद अधिकारीले डाक्टर केसी अहिले देशी तथा विदेशी शक्तिको पञ्जामा परेको पनि आरोप लगाए । उनले भने, ‘गोविन्द केसीलाई साझा विवेकशीलका नेताहरुले बोकेका थिए । तर, अपराध वा पाप लागेको छ । साझा विवेकशील पार्टी छिन्न भिन्न भएको छ ।’
गोविन्द केसीलाई उनले बधाईसमेत दिए । अधिकारीले भने, ‘म गोविन्द केसीलाई बधाई दिन चाहन्छु, अब मनमोहन मेडिकल कलेज काठमाडौं आउँदैन् । तपाईहरु सफल हुनुभयो । हामी त मर्यौं । मर्यौं । २ अर्ब ऋण छ । बिक्रि भएर ऋण तिर्न पुगे त तिरौंला नभए जेलमा बास होला ।’
Tagged डा. गोविन्द केसी मनमोहन मेडिकल कलेज साझा पार्टी
Tags: डा. गोविन्द केसी, मनमोहन मेडिकल कलेज, साझा पार्टी